Just Sudoku - Professional Edition Game...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Just-Sudoku Game လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!သူငယ်ချင်းတို့ အပြင်းပြေ ဦးနှောက်စားရအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...! တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုGame လေးတွေ ဆော့ရတာ အပြင်းပြေတယ်...! ကျွန်တော်ကတော့ Game လေးတွေဆိုရင် သဘေားကျ၏...!သူငယ်ချင်းတို့လည်း အပြင်ပြေဆော့ချင်ရင် ယူသွားနော်...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 2.22MB ရှိတယ်...!စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်..!အွန်လိုင်းမှာပြိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် "ဒီနေရာမှာ.." ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်...!အကောင့်တစ်ခုတော့ လုပ်ပေးရမှာပါ...!
1 Just Sudoku - Professional Edition (2.11 MB)
2 Just Sudoku (2.22 MB)
No Response to "Just Sudoku - Professional Edition Game...!"